Sawirro: waxa ay yihiin, astaamo, qaab dhismeed iyo khataro | Saadaasha Shabakadda
Jiilaal jiilaal ah oo ka tarjumaya filimada, silsiladaha, kartoonada, iwm. Ma yihiin icicles. Waxay ku saabsan tahay qaybo baraf ah oo qasbaya dusha sare ee saqafyada, laamaha geedaha, jihooyinka dhulka iyo waxyaabo kale oo badan oo muuqaalka ah. Badanaa waxay dhacaan xilliga qaboobaha sababo la xiriira heer-kul hooseeya iyo baraf culus. Mararka qaarkood waa la abuuri karaa iyadoon loo baahnayn baraf sidan oo kale ah waxayna dadka u horseedi karaan dhibaatooyin daran inta ay dhacayaan.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa sida icicles u sameysmo, maxay yihiin astaamahooda iyo halista suurtagalka ah ee ay matali karaan.
1 Icicles xilliga jiilaalka
2 Sameynta barafka
3 Xaaladaha deegaanka
4 Khataraha suuragalka ah
Icicles xilliga jiilaalka
Dhab ahaan waxaan ku aragnay waxyaalaha jilicsan ee filimada, taxanaha, kartoonada, kaararka boostada iyo meelo badan. Khasab kuguma aha inaad ku aragtid iyaga qof ahaan si aad u ogaatid sida ay yihiin. Waa nooc ka mid ah qaboobaha caadiga ah waxaana badanaa sabab u ah qulqulka joogtada ah ee biyaha dareeraha ah oo lagu daro dhaxan xoog leh oo u eg xilligan oo kale sanadka. Waxaan ognahay in xilliga qaboobaha uu si aad ah hoos ugu dhaco, gaar ahaan habeenkii. Qulqulka joogtada ah ee biyaha dareeraha ah ee saqafka sare inta lagu gudajiro roobka roobku wuxuu keenaa in barafku sameeyo.
Hoosudhaca lama filaanka ah ee heerkulka oo udhaxeeya 0 darajo awgeed waxaan heli karnaa xaaladaha ugufiican ee sameynta barafka. Magac ahaan, marka heerkulka deegaanku ka hooseeyo 0 darajo oo uu roob da'o ama da'o, icicles ayaa laga yaabaa inay ka samaysmaan daadashada joogtada ah ee biyaha dareeraha ah. Kuwani waa astaamo caan ku ah barafka loo yaqaan 'icicles'.
Badanaa magaalooyinka dhexdooda waxaa ku samaysma dusha sare ee saqafka. Waa lama huraan inaad horey u qaadatay. Sidan oo kale, waxaan dammaanad ka qaadeynaa in heer kulku aad u hooseeyo. Biyuhu sidoo kale waxay u eg yihiin inay wax ku soo ururiyaan saqafyada guryaha ka dibna ay sameeyaan icicles. Kala dhalaalida qayb ahaan barafka dhaca inta lagu jiro saacadaha dhexe ee maalinta ilaa waxay keenaysaa qulqulo badan oo biyo ah oo ka hooseeya bustaha cad ee barafka. Marka heerkulku hoos u dhaco habeenkii oo khadadkaas biyaha ahi ay ku dhammaadaan cidhifyada saqafka sare, wuxuu bilaabmaa inuu qaboobo illaa uu ka adkaado baraf.
Habeenkii, qabowga dhaxanta ayaa sababa qolof baraf ah inuu ku dul kaco barafka saqafka oo qaybta hoose ee gogoshaas ayaa gebi ahaanba ka go'doonsan wabiga. Tani waa sida qaybta gudaha ay u sii socoto hoosta. Dhibcaha ka soo baxa waxay ku dhammaadaan dhalaal ama soo dhex mara dhegeysto ilaa uu mar kale barafowdo isla markiiba. Waana inay la xiriiraan hawada banaanka taas oo heer kulkeedu aad u hooseeyo waxayna ku samaysmaan markay saacaduhu dhaafaan. Tani waa sida cirbadaha fiiqan ee fiiqan ee dabeecadda u leh xilliga jiilaalka la soo saaro.
Waa wax iska caadi ah in maalinta cirka la nadiifin karo oo heerkulku si tartiib tartiib ah u dhaqmayo. Sidan oo kale, cirbadaha barafka qaarkood ee ka sameysma godadka saqafyada ayaa la goyn karaa markii qorraxda la iftiimiyo ama kuleylka uu dhalaaliyo. Tani waxay khatar ku abuureysaa dadka ka soo gudbaya guryaha dusha sare. Mararka qaar, dadka oo hoosta maraya markii ay dhacayeen barafka waxaa u dhintay icicles. Noocan wararka ah wuxuu dhacaa ku dhowaad jiilaal kasta wadamada aadka u qabow sida Ruushka halkaas oo qabowga daran uu inta badan soo saaro noocan ah sameynta saqafyada.
Ma aha oo kaliya in lagu yaqaan magaca icicles, laakiin waxay kuxirantahay halka aan joogno waxaa lagu garan karaa magacyo kale. Waxay kuxirantahay meesha aad joogto waxaa jira liis magac ah oo aan helno spiers, chipiletes, pinganiles, candelizos, calambrizos, rencellos, kuwa nuugaya ama nuugaya. Halkan Isbaanishka gudaha gudaha Cantabria waxaa lagu magacaabaa cangalitu ama cirriu halka dooxada Roncal loogu yeero churro in kastoo ereyga ugu yaabka badan uu yahay calamoco. Waxay loola jeedaa xabka oo u dhaca sidii isagoo sanka u fooraraya. Tani sidoo kale waa mid caan ku ah silsiladaha majaajillada ee xabka sanka dadkaas qaboojiyaa markay aad u qabow yihiin.
Khataraha suuragalka ah
Icicles kaliya kuma sameysna aagga saqafka sare ee magaalo, laakiin sidoo kale waxaa lagu soo saaraa dabeecadda. Waxaan ku arki karnaa buuraha qaarkood, dhagaxyada, laamaha geedka, iwm. Sidee loo soo saaraa cirbadahaan barafka ah. Ugu dambeyntiina, waxaan ka heli karnaa heer khatar ah icicles kaliya haddii laga soo saaro magaalooyinka. Deegaanada dabiiciga waxaan ku leenahay muuqaal qurux badan oo mudan in lagu keydiyo sawirrada.
Si kastaba ha noqotee, magaalooyinka waxay ku qaadi karaan khatar. Iyadoo barafku ku ururay saqafyada iyo dhalaalkii ka dambeeyay ee aan kor kaga soo hadalnay, dhibco qaboojiye awgood. Haddii mar kale ay sara u kacaan heer kulka, cirbadahaan barafka ah waxay bilaabaan inay soo dhacaan waana marka ay khataro u abuuraan dadka lugeynaya. Dalkeenna waxay uga dhacdaa hab go'doon ah maadaama aanaan inta badan qaboojiyaha qaboobaha sidan u badnayn. Si kastaba ha noqotee, ka dib duufaanka jiilaalka sida sannadkan filomena, khatarahaas ayaa dhici kara.
Waxaa lagu qiyaasaa in qiyaastii 100 sanadkiiba Ruushka ay u dhintaan daadinta qulqulka. Wadamada qaarkood sida Finland waxaa ka muuqda calaamado dhismayaal ka digaya halista jiritaanka ifafaalahaan. Meelaha qaarkood waxaa loo tixgeliyaa inay tahay dhimashadda dhimashada maxaa yeelay sidoo kale waxay leeyihiin noocyo kala duwan. Waxay bilaabeen inay ka hadlaan 1947 markii dhacdo yaab leh ay ka dhacday badda moolka. Waxay dhacdaa biyo aad u qabow oo ka mid ah badweynta Arctic ama Antarctic halkaas oo heerkulkoodu gaadho -20 30 °. Heerkulka badda ayaa ka sarreeya tan iyo inta biyaha dusha sare ay baraf yihiin. Sidan oo kale, milixda ayaa laga reebay hawshan waana la quusin karaa maadaama cufnaanteeda ay ka sarreyso. Biyaha ku hareeraysan barafoobay iyo tiir ayaa la soo saaray wuxuu ahaa fadhiid baraf ah oo barafeeya biyaha marka ay soo galaan.
Waxaa loo yaqaan 'icicle of death' maadaama ay qaboojiso wax kasta oo jidkeeda ku jira. Haddii uu la kulmo xayawaan qunyar socod ah, aakhirka wuu qaboojinayaa.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto icicles iyo astaamahooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Icicles